Batrị na teknụzụ na-akwụ ụgwọ nke Meizu 17 ka akwadoro | Gam akporosis
Na-esote Mee 8 ga-abụ ụbọchị nke anyị na-amata nke ọma Meizu 17, smartphone nke na-agba ọsọ ka ọ bụrụ otu n'ime arụmọrụ kachasị elu nke afọ a n'ihi eziokwu ahụ ọ ga-etu ọnụ maka njirimara kacha mma na nkọwapụta teknụzụ na ụlọ ọrụ ahụ. Anyị kwuburu na ọ ga-abụ Eprel 22, mana ọ ghọrọ a ozi ọma nyere dị ka ndị isi site na mgbasa ozi China dị iche iche.
Companylọ ọrụ ahụ abanyela na nso nso a iji gosipụta ihe anyị niile chọrọ ịma ma gbasara batrị na teknụzụ na-agba ngwa ngwa nke ekwentị ga-eji. A gbasaa data ndị a n'okpuru.
Meizu ekpughe ọkwa ọhụụ ọhụrụ banyere Meizu 17
Mgbe onye nrụpụta China kwupụtara - ma ọ bụ kwenye, kama - na ọnụ ga-enwe Chipset Qualcomm Snapdragon 865, nke nwere isi asatọ ma na-arụ ọrụ na oke ume ọhụrụ nke 2.84 GHz, ekpughela ugbu a na nnukwu batrị 4,500 mAh bụ nke a ga-etinye n'okpuru mkpuchi ya. Emere nke a site na ihe nkwado ọhụrụ, nke bụ nke anyị kwụgidere n'okpuru ma gosikwa na teknụzụ na-agba ngwa ngwa nke anyị ga-ahụ na flagship ga-abụ 30 W, nke ga-adị site na ọdụ USB-C.
Meizu 17 batrị mara ọkwa
N'ụzọ na-akpali mmasị, ozi a abanyelarị n'oge gara aga. Otu oge dị otú ahụ bụ nke akwụkwọ nkwado nke kwuru banyere ikike batrị na teknụzụ na-agba ngwa ngwa.
N'aka nke ọzọ, data na-egosi na ojiji nke sistemụ UFS 3.1 na-eguzo ma na-eche nkwenye sitere n'aka ụlọ ọrụ ahụ, nke nwere ike ichere ruo ụbọchị nke mbido ekwentị. Mmejuputa iwu a Oge ngosi ngosi ohuru 90 Hz, nke na-emezigharị onwe ya dị ka ọhụụ ọhụụ na njedebe na-arụ ọrụ dị elu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Batrị 4500 mAh nke nwere 30 W ngwa ngwa ka akwadoro maka Meizu 17